जंगलभित्र ७५ वर्षदेखि ५०० बढी कारको जाम - साक्षी खबर जंगलभित्र ७५ वर्षदेखि ५०० बढी कारको जाम - साक्षी खबर
असार २९, २०७८ | ६४१ पटक पढिएको
बेल्जियमको दक्षिण भागमा अवस्थित एउटा घना जंगलमा पछिल्लो ७५ वर्षदेखि कारको भीषण जाम भैरहेको छ । जंगलभित्र कारको ट्राफिक जाम, त्यो पनि ७५ वर्षदेखि ! यो अपत्यारिलो तर सत्य घटनाको यथार्थ चाहिं ऐतिहासिक नै छ ।
वास्तवमा उक्त ठाउँमा दोश्रो विश्वयुद्धदेखि नै कारको जाम लागिरहेको छ र एक प्रकारले कारको विशाल चिहानको रुपमा रहेको छ ।
घना जंगलभित्र रहेको उक्त च्याटिलन कार ग्रेभयार्डमा ७५ वर्षदेखि ठूलो संख्यामा कारहरु थन्किएका छन् । ती कारहरु जिर्ण भैसकेका छन् र कारभित्रैबाट रुखबिरुवा पलाउन थालिसके । फ्रान्स र बेल्जियमको सीमा क्षेत्रमा पर्ने च्याटिलन गाउँ नजिकै छ उक्त कार चिहान । जहाँ ५०० भन्दा बढी कार त्यसै थन्किरहेका छन् वर्षौँदेखि ।
उक्त ठाउँमा त्यति धेरै कार कसरी आए ? र कसरी थन्किए ? भन्ने कुरा रहस्यकै रुपमा रहेको छ । तर कतिपयको भनाइ अनुसार दोश्रो विश्वयुद्धका बेला त्यहाँ खटिएका अमेरिकी सेनाले ती कार ल्याएर जम्मा गरेका हुन् ।
अमेरिकी सेनाले चर्को कर तिर्नु नपरोस् भन्नका लागि ती कारहरु जंगलभित्र लगेर लुकाएका थिए । युद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकी सेनाले ती कारहरु अमेरिका नै लैजान चाहन्थे तर युद्ध समाप्तीसँगै कारहरु त्यहाँबाट लगिएनन् । जसका कारण जंगलभित्र वर्षौँदेखि कारको चिहान बनिरहेको छ ।